Ifektri yeviniga - Abakhiqizi beVinegar baseChina nabaphakeli
Uviniga we-IBC 12%
Igama lomkhiqizo: uviniga ongu-12% ovinjelwe, uviniga weviniga Okuqukethwe: Amanzi, utshwala obudliwayo. Ingqikithi ye-acid ≥ 12.00g / 100ml Impilo yeshelf: Izinyanga eziyi-18 isitolo endaweni enomthunzi futhi eyomile ibekwe uphawu. Isici somkhiqizo: ukuma kwawo kucacile, ngaphandle kwezulu, ngokuqina okuphezulu futhi akukho ukuphonsa udaka. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa ekuhlanganisweni kwesizini okuyinkimbinkimbi, ukukha imboni, ukulondolozwa kokudla, ukuhlafunwa kokudla, imboni yezokwelapha. Ukucaciswa: Imigqomo engu-1000L IBC 20 nge-20FCL Nutrition Information Server size: 100mL NRV% Energy ...
Iviniga Elayisi Elimhlophe
Igama lomkhiqizo: 9% ilayisi elineviniga uviniga oqinisekisiwe we-Halal, uviniga omhlophe welayisi Umqobelo: Amanzi, ilayisi, utshwala obudliwayo. Ingqikithi ye-acid ≥ 9.00g / 100ml Impilo yeshelf: izinyanga eziyi-12 isitolo endaweni enomthunzi neyomile ebekwe uphawu. Isici somkhiqizo: ukuma kwawo kucacile, ngaphandle kwezulu, ngokuqina okuphezulu futhi akukho ukuphonsa udaka. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa ekuhlanganisweni kwesizini okuyinkimbinkimbi, ukukha imboni, ukulondolozwa kokudla, ukuhlafunwa kokudla, imboni yezokwelapha. Ukucaciswa: I-25L yebhakede lepulasitiki Amabhakede angama-700 nge-20FCL Nutrition Information S ...
I-Kosher eqinisekisiwe, uviniga welayisi Izithako: amanzi, isiraphu yommbila we-fructose, ushukela omhlophe, usawoti, ushukela, utshwala, ilayisi, i-MSG, i-citric acid, i-sodium benzoate, i-sucralose Ingqimba ye-asidi ≥ 3.50g / 100ml Impilo yeshelf: Izinyanga eziyi-12. Isitoko endaweni enomthunzi futhi eyomile evaliwe. Isici somkhiqizo: Ukusetshenziswa Okumnandi nokumuncu: Kufanelekile ukudla kwaseJapan, iShihi Ukucaciswa: I-18L ngebhokisi lezinqola eziyi-1000 ngakunye kwe-20'FCL Nutrition Information Server size: 100mL NRV% Energy 511kJ 6% Protein 0g ...
Uviniga omhlophe welayisi Ungenamibala, ucacile, umuncu futhi unephunga elimnandi. Ukuhlanganiswa okubandayo nokupheka kungagcina umbala wokuqala wesitsha. Izithako: amanzi, ilayisi, utshwala obudliwayo, usawoti, ushukela I-asidi ephelele ≥ 3.50g / 100ml Isitoko endaweni enomthunzi neyomile ebekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 500mL * 12 ngebhokisi ngalinye le-1500 yamabhokisi ku-20'FCL Nutrition Information serving size: 100mL NRV% Energy 93kJ 1% Protein 0g 0% Fat 0g 0% Carbohydrate 2.6g 1% S ...
9% irayisi uviniga Wenziwe ngobuchwepheshe bokufaka uviniga ofakwe ngaphakathi. Ilungele amaqanda anukayo, ushukela omnyama no-soya. Ingancibilikisa amaqanda amaqanda kungakapheli amahora angama-24 lapho senza ujusi weqanda uviniga. Izithako: amanzi, ilayisi, utshwala obudlekayo Ingqimba ye-asidi ≥ 9.00g / 100ml isitolo endaweni enomthunzi neyomile ebekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 500mL * 12 ngebhokisi ngalinye le-1500 yamabhokisi ngakunye kwe-20'FCL Nutrition Information Server size: 100mL NRV% Energy 130kJ 2% Prot ...
1 + 1 uviniga welayisi othambile Uthambile ngombala futhi unambitha ukuqabula. Ilungele izitayela zokupheka ezahlukahlukene. Ngenkathi kugcina umbala wokuqala wemifino, kungabenza banambithe ukhrisimu futhi kuqabule. Uma isetshenziswa njenge-sauce yokugqoka nokudonsa, ingenza izitsha zinambitheke zimnene, ziphakathi, ziqine futhi ziqabule. Izithako: amanzi, ilayisi, utshwala obudlekayo, isosi yesoya, ushukela omhlophe ocwebezelayo, i-lactic acid, i-citric acid, i-malic acid, i-disodium ancidi, i-sodium benzoate, I + G, sucralose. I-acid ephelele ≥ 4.00g / 100ml S ...